18 Responses to “သုံးရောင်ခြယ်ရေကန်”
သဘာဝအလှတရားတွေက နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေကြတယ်နော်။
သူတို့အယူနဲ့ သူတို့တော့ ဟုတ်နေကြတာဘဲ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်တော့ အကျိုးရှိစေတာ အမှန်ပါဘဲ။
သဘာဝဖြစ်နေတဲ့ သုံးရောင်ခြယ် ထူးခြားရေကန်နဲ့ အယူအဆလေးတွေကို ဗဟုသုတအဖြစ် မှတ်သွားတယ် ချောရေ။ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တွေအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ sight-seen တစ်ခုပေါ့နော်။
သွားမယ်ကွယ် တစ်နေ့တော့ :)
Amazing ! Thanks for sharing,sis !
သဘာဝအလျှောက် လှပနေတဲ့ သုံးရောင်ခြယ်ရေကန်
ရေကန်တစ်ကန်စီရဲ့ ဓါတ်သတ္တု အမျိုးအစားနဲ့ ပါဝင်နှုန်းက အတော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာ သေချာတယ်၊ အနီးလေးမှာ ကပ်နေကြပြီး အရောင်တွေ ကွဲနေတာကိုက လှနေတာ...၊ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ မချောရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် သိတာတစ်ခု တိုးသွားပြန်ပြီ...၊ ကျေးဇူး...။း)
စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ မမချောကြောင့် မိုးနတ်တို့တွေ
အဆန်းတကြယ်လေးတွေကို မိတ်ဆက်ပေးတယ့် မချောကြောင့် ဗဟုသုတ တိုးပေတယ်..
ထူးဆန်းတယ်နော် .... ထူးဆန်းတဲ့သဘာဝ ဖြစ်ရပ်တွေ ရဲ့နောက်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရိုးရာယုံကြည်မှု တစ်ခုလည်း ရှိနေတက်တယ်နော် ... အစ်မ ... ကျေးဇူးပါဗျာ ... အခုလို သိခွင့်ရလို့ ပါ .... ။
ထူးထူးဆန်းဆန်းရေကန်ကို စူးစမ်းသွားပါတယ်အမရေ.. :)
မနီးမဝေးမှာ အရောင်ကွဲရေကန်(၃)ခုရှိ အတူတည်ရှိနေကြတာ အံ့သြစရာနော်။ သူတို့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်တွေကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ။ အရောင်တွေ သိသိသာသာကွဲပြားနေမှ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေပြီပေါ့။ ရှာရှာဖွေဖွေဖော်ပြပေးတဲ့ ချောကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရှာရှာဖွေဖွေတင်ပြပေးတဲ့ အတွက် မမရေ..ကျေးဇူးပါ...လို့..:)